नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): अमेरिकाको डिसीमा नासो द्वारा आयोजित बनभोज तथा सम्मान कार्यक्रममा नेपाली राजदुत डा. शंकर शर्माले नेपालमा गरिबी घटेको तर आर्थिक ब्रिद्धीदर अझै सन्तोष नरहेको जानकारी
अमेरिकाको डिसीमा नासो द्वारा आयोजित बनभोज तथा सम्मान कार्यक्रममा नेपाली राजदुत डा. शंकर शर्माले नेपालमा गरिबी घटेको तर आर्थिक ब्रिद्धीदर अझै सन्तोष नरहेको जानकारी
उता अबैतनिक बाणिज्यदुत एबम बरिस्ठ लोक गायक प्रेमराजा महत निवास बाल्टिमोरमा भब्य जमघट
उताअबैतनिक बाणिज्यदुत एबम बरिस्ठ लोक गायक प्रेमराजा महत निवास बाल्टिमोरमा भब्य जमघट थियो सोही दिन । महत पुत्र द्वयको शुभब्रतबन्ध को उक्त पार्टी मा थुप्रै नेपाली को जमघट देख्दा लाग्थ्यो नेपालमै छौं हामीहरु । प्रेमराजा महत परिवार लाई बधाई पुत्र द्वयको शुभब्रतबन्धका अबसरमा र यो नेपाल झझल्किने नेपाली जमघट का लागि ।
हामी अलिकती ढिलो पुगेकाले जमघट को पुरा फोटोहरु खिच्न सकेनौं ।